Hahazo fampitaovana, fiara 4X4 sy moto, ny mpamonjy voinan’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Hamboarina ireo fiara simba. Handray mpamonjy voina miisa 100 ihany koa, izay hatomboka amin'ny 50 aloha, hanampy ireo efa amperin’asa. Nivoitra ireo taorian’ny fitsidihan’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina ny foiben’ny mpamonjy voina eo Tsalalana omaly. (Jereo Sary Tohiny)
Nindaosin’ny fahafatesana, androany zoma 07 febroary, i Dr Li Wenliang, dokotera miasa ao amin’ny hopitalin’i Wuhan, ary nanao fanairana voalohany amin’ny fisian’ny valanaretina Coronavirus sy ny zavadoza aterany ny 30 desambra 2019. 34 taona i Dr Li Wenliang, dokotera maso izy, ary ny 30 janoary 2020 no voamarina fa voan’ny coronavirus, dia izao maty izao. Nisy fanjevoana ihany izy ity, raha nilaza omaly ny OMS sy ireo angom-baovao maro fa maty omaly alakamisy 06 febroary izy, nefa avy eo nandiso izany indray ny hopitaly mbola nitsabo azy fa tsy maty izy, fa manaraka fitsaboana na dia sarotra aza, fa tamin'ny 2 maraina dia nanambara ny hopitaly fa maty i Dr Li Wenliang.
Nitsidika ny Foibe Akamasoa eny Andralanitra ny Profesora Rafamantanantsoa Fontaine, Filohan'ny Oniversiten'i Fianarantsoa niaraka tamin'ny Tale Kabinetran'ny Oniversite Dr Rakotonirina Jean Raymond, ny marainan’ny alarobia 5 febroary 2020. Nitafatafa sy nidinidinika tamin’ny Mompera Pedro izy ireo nanoritsoritana ny mety ho fiaraha-miasa amin'ny Oniversiten'i Fianarantsoa sy ny Université Saint Vincent de Paul, ity farany izay misy sampam-piofanana maromaro toy ny « Sciences de l'éducation », Paramed, Informatika, ... (Jereo Sary Tohiny)
Nanainga androany 05 febroary 2020 maraina ireo kamiao miisa enina, izay hanatitra an’ireo fanampiana avy amin’ny BNGRC ho an’ny traboina any amin’ireo faritra izay voa mafy tamin’ilay ranobe ny volana janoary teo. Hisitraka izany ireo traboina ao amin’ny Distrikan’Ambato-Boeny sy Mampikony ary Port Bergé. Toy izany koa ireo traboina tao amin’ny Kaominina Tsaramasoandro, Anjiajia, Andranofasika ary Ambondromamy izay amin’iny lalam-pirenena faha-4 iny. Tokantrano miisa 3 198 no voakasik’ity fanampiana niainga androany ity.
Nifampiresaka tamin’ireo Fikambanan’ireo kôperativa mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra ny mpitantana ny tanàna, notarihan’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina androany. Tao amin’ny lapan’ny tanàna ny fihaonana « nahafantarana ny tena manahirana azy ireo, ary indrindra ny filan’ny Kaominina sy ny mponin’Antananarivo eo amin’ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ho fanatsarana ny fitaterana ». Nandritra izany koa no nanazavan’ny Ben’ny tanàna ny momba ny saran’ny « fourrière » izay maha be resaka taorian’ny nandanian’ny mpanolontsain’ny tanàna ny tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra taona 2020. « Raha mahay mifanabe sy manara-dalàna isika dia tsy hisy fiara lasa an’ny amin’ny « fourrière » izany », hoy i Naina Andriantsitohaina. Tsy mbola mihatra aloha ny saran’ny « fourrière » vao nofaritana sy nankatoavin’ny mpanolontsaina. Hitohy amin’ny zoma izao ity fihaonana androany ity. (Jereo Sary Tohiny)
Mirongatra ny ambalavelona, aretin’ny maizina, ao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Bemanonga, Distrikan’i Morondava. Nanomboka ny Alatsinainy 3 febroary teo izy io. Ny ankizivavy no tena voa, efa ho telopolo izao. Nisy nentina ao amin’ny FLM Bemanonga ivavahana sy ametrahan-tanana hanalana ny fanahy ratsy mangeja sy mampahery fihetsika ireo ankizy voa. Nanapa-kevitra ny mpitondra ao an-toerana nampiato vonjimaika ny fianarana ao amin’ny EPP Marovoay sy ny CEG ary Lycée ao Bemanonga mandrapahitana vahaolana. Nidina eny an-toerana ny Ben’ny tanàna sy ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Morondava. (Jereo Sary Tohiny)
Nanao fanambarana miaraka ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien) sy ny Fikambanana TANY manohitra ny fanomezana tany 60 000 hekitara eto Madagasikara ho ampiasain’ny orinasa Elite Agro LLC avy any Emirats Arabo Mitambatra. Tsipahanay ny fampiasàna io karazana fiombonana antoka io hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo, hoy ny fanambarana, satria « fananana iombonan’ny vahoaka Malagasy ny tany fa tsy entam-barotra ». Toherinay mafy, hoy hatrany ny fanambarana, ny paik’ady nosafidian’ny mpitondra izay miantehatra indrindra amin’ny mpampiasa vola sy ny vondron’orinasa avy amin’ny firenena vahiny eran-tany amin’ny fambolena ny tany malagasy, fa tsy manao ho laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny hery velon’ny firenena amin’ny alàlan’ny fampitomboana isa hatrany ny fepetra fanohanana sy fanampiana ny tantsaha sy ny mpandraharaha avy eto an-toerana.
Mankalaza ny Andro manerantany hiadiana amin’ny homamiadana, isaky ny 04 Febroary, i Madagasikara. Ny lohahevitry ny fankalazana tato anatin’ny telo taona 2019-2021 dia ny hoe “I am … and I will” izay azo adika amin’ny teny Malagasy hoe :“Fantatro ny tenako, ary fantatro ny tokony hataoko” na koa hoe : “Handray fanapahan-kevitra mifandraika amin’izany aho”. Ny fankalazana ny andro iadiana amin’ny homamiadana amin’ity taona 2020 ity dia mifantoka indrindra amin’ny fampiasam-batana. Raha ny antotanisa dia eo ho eo amin’ny 1600 isan-taona ny olona voan’ny homamiadana tsaboina any amin’ireo hôpitaly eto Madagasikara. Ny vinavina nokajian’ny OMS anefa dia mety ho mahatratra 18 400 isan-taona izany.
Nitohy tany Alaotra ny dian’ny filoha Rajoelina mivady omaly nitondra fanampiana sy nampahery ireo mpiray tanindrazana traboina noho ny andro ratsy. Tao Ambohijanahary sy Beanana, samy Kaominina ao amin’ny Distrika Amparafaravola ny delegasiona notarihin’izy ireo. Ahitana traboina maro, ary nitondra takaitra tamin’iny andro ratsy ity ireto Kaominina ireto. Nahetsika ireo fitaovana vao azon’ny Tafika Malagasy toy ny fiaramanidina, hekikoptera nitatitra ireo fanampiana. Misy ny andiana mpitsabo mandray an-tanana ireo tratry ny tsy fahasalamana. Tany an-toerana ihany koa ny solontenan’ny fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny sakafo, ny solontena maharitry ny Banky Iraisam-pirenena. (Jereo sary Tohiny)